Sidaan U Arko Saamiga Itoobiya Ku Yeelanayso Maal-gashiga Berbera- Qalinka: Xamse C/raxmaan Khayre | FooreNews
Home Aragtida Dadweynaha Sidaan U Arko Saamiga Itoobiya Ku Yeelanayso Maal-gashiga Berbera- Qalinka: Xamse C/raxmaan Khayre
Sidaan U Arko Saamiga Itoobiya Ku Yeelanayso Maal-gashiga Berbera- Qalinka: Xamse C/raxmaan Khayre
FoorenewsMar 03, 2018Aragtida Dadweynaha0
Waddanka Aan badda lahayn ee Itoobiya oo baahi wayn u qaba Inuu helo bad wuxuu haystaa dhowr marrin oo uu ka gaadhi Karo deked:
1. Marinka Djibouti ee dhinaca waddada (909Km)
2. Marrinka dekedda Djibouti ee dhinaca tareenka (780km)
3. Marinka dekedda Berbera (937 km)
4. Marinka dekedda Masawa ee Eretariya (1163km)
5. Marinka dekedda PortSudan ee Sudan (1900Km)
6.Marinka dekedda Mombasa ee Kenya (2,067 km)
Xidhiidhka Eretariya iyo Itoobiya ma wacna sidaas darteed waxba ugama Soo dagaan Dekeda Casab. Dhinaca kale, Itoobiya ma rabto in Hal Marin (#dekeda Djibouti) ay ku tiirsanaato sababo badan oo jira awgeed. Sidaas darteed marinka Berbera waa ka maangalka ah ee u furan waqti xaadirkan ee ugu Soo xiga ka Djibouti. Mombasa iyo PortSudan Mustaqbalka suurtagal maaha inay Itoobiya adeegsato.
Waa duruufahaas kuwa keenaya in Itoobiya ay maalgashato jidka isku Xidha Berbera-Wajale-Addis ama BerberaCorridor. Waa Halka ay 19% KU yeelanayso heshiiska saddex-geesoodka ah. Haddii ay SOMALILAND dhisan karto jidkaas amase ay heli karto dayn way fiicnaan lahayd. Waxaa iyaduna taala meesha in Itoobiya tahay macmiilka ugu wayn waqti xaadirkan taas oo in la kasbado ay muhim tahay ( madaama tartan u ka dhex jiro Berbera iyo Djibouti). Aragtidayda gaarka ah, xirfad badan iyo ciyaar Wanaagsan weeyi in Itoobiya saami ay KU yeelato Dekeda iyadoo laga feejignaanayo in Mustaqbalka ay damcado mulkiyada Dekeda.Siyaabo kale oo aan u dhaliilsanahay heshiiska Dekeda way jiraan laakiin qoddobkan ah in macmiilka laga qaybgeliyo lahaanshaha Shirkada maamulaysa Dekeda waxaan u arkaa hal-abuur iyo arrin Haboon.
DJibouti waxay jeclayd in xuurto KU haysato suuqa wayn ee Itoobiya oo ay ahaato marinka keliya ee laga galo Itoobiya. Berbera waa Dekeda keliya ee waqti xaadirkan la tartami karaysa ee Gobolka ku taal. Dekedaha Mussawa, Mombasa iyo PortSudan hadeer kuma jiraan ciyaarta. Waxaanad ogaataa in halka loo socdaa tahay Dekeda uu ka dhoofi doono GAASKA ceegaaga Dawlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya. Hadda waxay u muuqanaysaa in ay dekedda u dhow gobolkaas ee Itoobiyana ay wax ku leedahay ee Berbera ay meel ku sii tiirsatay mashruuca 2aad (Oil and Gas Terminal) ee dhoofinta GAASKA Itoobiya.
Previous PostWasiir Sacad Oo Sheegay Inay Kala Duwan Yihiin Heshiiskii Xukuumaddii Hore Ee Siilaanyo Lagashay Shirkada DP-World Iyo Kan Cusub Ee Xukuumada Muuse Next PostXog Culus: Xukuumadda Oo Dhawaan Shaacinaysa Furaha Cusub Ee Telefanada Dibada Ee Ay Somaliland Yeelanayso Iyo Qaar Ka Mid Shirkadaha Isgaadhsiinta Oo Dagaal Kaga Hortagaya + Nuxurka Kulankii Cirro Iyo Faysal Ee Shalay